အောကျတိုဘာ 20, 2019 – Healthy Life Journal
ရုတ်တရက် နှလုံးအတက်ရရင် ဘာလုပ်ရမလဲ (Acute Heart Attack Treatment)
မေး. ဆရာရုတ်တရက် နှလုံးအတက်ရခြင်း (Acute heart attack)ကို ပြုစုကုသနည်းလေးသိပါရစေ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေမှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. (၁) လက်ကောက်ဝတ်သွေးကြောခုန်တာ (နှလုံးခုန်)နဲ့ သွေးဖိအား BP စမ်းပါ။ တည်ငြိမ်ပါသလား။ (၂) Ventricular fibrillation နှလုံးအောက်ခန်း ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့...
အိမ်မီးလောင်ရာက ခန္ဓာကိုယ် ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးလောင်ကျွမ်းခဲ့သူ
၊ ကိုထက် ၊ အသက်လေးနှစ်အရွယ်က ဂျွန်နီဟာ အိမ်နောက်ဖေးအိမ်လေးထဲမှာ ကစားနေတုန်း မိသားစု အချစ်တော်ခွေးက ဖယောင်းတိုင်ပေါ်မှောက်လျက်ကျရာက အိမ်လေး မီးစွဲလောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ အိမ်မီးကြောင့် ဂျွန်နီ မီးစွဲလောင်ပိတ်မိနေခဲ့ရာ ဂျွန်နီရဲ့ စူးစူးဝါးဝါးအသံကြားမှ အစ်မ၀မ်းကွဲဖြစ်သူက မီးတောက်တွေကြားမှ ဆွဲခေါ်ကာ ဂျွန်နီ့ကို ကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။...
အပျင်းကြီးတဲ့ မေမေဖေဖေတို့ Diaper သုံးတာလား
မြန်မာပြည်မှာ ကလေးမွေးလာပြီဆို အ၀တ်အနှီးပဲ သုံးမှာလား၊ diaper သုံးမှာလားဆိုတာ debate တခုပါပဲ။ တချို့ကလည်း diaper လောင်တဲ့ ကလေးဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး မိခင်စိတ်မရှိတဲ့ အမေတွေပဲသုံးတာစသဖြင့် ငြင်းကြပါတယ်။ ဒီအငြင်းပွားတာတွေကို ၀င်မပါဘဲ diaper သုံးပြီးရင် ဘယ်လို care လုပ်ပေးမလဲဆိုတာ...
အောကျတိုဘာ လ၊ 2019 ခုနှဈ
Featured healthy Nutrition weird News Skin Care Beauty Diabetes Food Pregnancy kid Female mental care Cancer Eye Care Healthy Life Physical Exercises Lessons Knowledge Foods Celebrities Experience Male Dental Care Weight Loss Myanmar Health healthy eating Stress fun laughter Family Sleep Baby Vegetables Lesson Hypertension Mental Health Home Remedies Sex Kidney